update ganaax Safarka - important information for people coming to the USA | USAHello
update ganaax Safarka
on June 26, 2018 – the United States Supreme Court made a decision about President Trump’s executive order. Amarkan wuxuu xadidayaa safarka ka toddoba dal. Garsoorayaasha Maxkamadda Sare ayaa sheegay in xayiraadda safarka loo ogol yahay iyo sii wadi laga yaabaa in.
Laga yaabaa 2019 – What have been the effects of the travel ban?
Dadka ka soo jeeda Iran, Liibiya, Soomaaliya, Syria and Yemen have been the most affected. Visas issued to people in those countries were down by 80% marka la barbar dhigo 2016.
update An on xayiraadda safarka - Maxkamadda Sare ayaa sheegay in xayiraadda safarka sii wadi laga yaabaa in.
The judges decided that President Trump has the right to use an si fulinta to stop non-citizens entering the USA. He has this right if he believes their entry could harm the country. Sidaas xayiraadda safarka sii joogi doono in meel loogu talagalay dadka ka toddoba dal. dalalka waa Iran, Liibiya, Suuriya, Yemen, Soomaaliya, Venezuela iyo North Korea.
Maxkamadda Sare ku dhawaaqay: “Madaxweynaha ayaa si sharci ah dhaqmaa ikhtiyaar u ballaadhan siiyey isaga inay hoos 8 The. S. C. §1182(f) in ay joojiso soo galo shisheeyaha galay Maraykanka. Jawaab aan muujiyey suurtagalnimada ah guusha on mudnaanta ay dalbanayaan in madaxweyne ku dhawaaqidda No. 9645 xadgudba faqradda Dhismaha ee.”
Waa maxay tan micnaheedu loogu talogalay qaxootiga iyo soo galootiga?
Dadka ka soo jeeda Iran, Liibiya, Suuriya, Yemen, Soomaaliya, Venezuela iyo North Korea laga yaabaa in aan soo socdaalo Maraykanka. Dad badan oo ka yimid wadamada kuwa looma oggola in ay yimaadaan shaqo ama waxbarasho ama fasaxa, labada. Qaar ka mid ah qaxootiga waxaa loo ogol yahay in ay yimaadaan, laakiin waxa ay noqon doontaa dhib badan.
edeb miiska ee channel wararka Tani waxay muujinaysaa sida CNN xayiraadda safarka saameeyaa dalal kala duwan.
The Project Assistance Refugee International (IRAP) dalabyo “ogaato xuquuqdaada” talo kuwa by xayiraadda safarka saameeyeen. version Ingiriisi ay guide waa mid cusub oo ka mid ah April 10, 2018, oo ay ku jiraan nidaamka cusub ee baadhitaanka qaxootiga.
Waxaad ka heli kartaa English version halkan.
You can find translations into Carabi [Carabi], English [farsi], iyo af Soomaali [Soomaali].
Ogow xuquuqdaada qaxooti ah ee USA
Macluumaadka on this page ka timaadaa Register Federaalka, ka Project Refugee Assistance International (IRAP) oo kale ku kalsoon tahay ilaha. Waxaa loogu talagalay hanuun iyo waa la cusboonaysiiyaa inta badan ee suurtogalka. USAHello ma siiyo talo sharci ah, mana ka mid ah waxyaabaha aannu loogu tala galay in la qaado, sida la-talin sharci. Haddii aad raadineyso qareen lacag la'aan ah ama qiime jaban ah ama caawimaad sharci, waxaan kaa caawin karnaa hesho adeegyada sharci oo bilaash ah iyo qiimo-yar.